BURMA: Online News & Analysis: High labor productivity equals human dignity
ဖွ.ံဖြိးူ ခြင်း ဟူသည်ဆင်းရဲခြင်းမှ ကြွယ်ဝခြင်းသို.ပေါင်းကူးပေးခြင်း၊ ရိုးရာကျေးလက်စီးပွါးရေးပုံစံမှ ပိုမိုနက်နဲသောကမ္ဘာ မြို့ပြစီးပွါးရေးပုံစံ သို့ကူး ပြောင်း ပေးခြင်းထက်အဓိပါယ်ပိုပေသည်။
ဖွ.ံဖြိးူ ခြင်းသည်စီးပွါးရေးအခြေအနေပိုမိုကောင်းမွန်စေ၇ုံမက လူသားတို.ဂုဏ်သိ်ိဏ္ခာ၊ လုံခြုံမူ့၊ တရားမျုတမူ.၊ စိတ်ထားမြင့် မြတ်မူ့ တို့ဖြစ်၏။
Low wages—which means underpayment of labor—has always beenacharacteristic of underdevelopment. Worse than unemployment, underpayment further isasign of exploitation. No wonder Filipino college graduates and professionals go abroad if they can to earn higher wages.